को'रोना सं'क्रमणका कारण नेपालमा थप १ को मृ’त्यु, मृ’त्यु हुनेको संख्या २९ पुग्यो ! -
को’रोना सं’क्रमणका कारण नेपालमा थप १ को मृ’त्यु, मृ’त्यु हुनेको संख्या २९ पुग्यो !
काठमाडौं । नेपालमा को’रोना स’क्रमणबाट थप एक जनाको मृ’त्यु भएको छ। ललितपुरस्थित स्टार अस्पतालमा एक जना को’रोना सं’क्रमितको मृ’त्यु भएको अस्पताल स्रोतले जनाएको छ । ललितपुर स्वास्थ्य कार्यालयका अनुसार रौतहटका २९ वर्षिय पुरुषको गएराती मृ’त्यु भएको हो। मृ’त्युपछि उनको पिसिआर रिपोर्ट आउँदा को’रोना सं’क्रमण भएको पुष्टि भएको हो।
उनको मृ’त्यु पछि मात्रै स्वाब संकलन गरिएको थियो । उनमा श्वासप्रश्वासको समस्या थियो । योसँगै नेपालमा कुल २९ जनाको को’रोना संक्र’मणका कारण मृ’त्यु भएको छ।